အဝေးမှသင်ယူခြင်း – Mason ဆိုကျောင်းများ COVID-19 ဌာနချုပ်
Mason ဆိုကျောင်းများ COVID-19 ဌာနချုပ်
Mason ၏ဝေးလံသောသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် (RLE) အရည်အသွေးမြင့်မားရန်ဖြစ်သည်, ဤမကြုံစဖူးသောအချိန်ကာလအတွင်းတာ ၀ န်များစွာထမ်းဆောင်ရမည့်မိသားစုများအတွက်လည်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအတွက်သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကိုပါ ၀ င်သည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RLE ဒီဇိုင်းတဲ့အခါ, ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုအတွေ့အကြုံအဖွဲ့သည်ကျွမ်းကျင်သူများစွာထံမှအရင်းအမြစ်များနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်, ငါတို့ရှေ့ဝေးလံခေါင်သီသင်ယူမှုကိုစတင်ခဲ့သူကိုအခြားပြည်နယ်များရှိခရိုင်၏အတွေ့အကြုံများအနေဖြင့်လည်းလေ့လာသင်ယူနေစဉ်. RLE နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ချဉ်းကပ်မှုသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဆရာများနှင့်ကျောင်းသားများအကြားတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောခိုင်မာသည့်ဆက်ဆံရေးကိုအခြေခံသည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးဖြစ်သောနည်းပညာများကိုအားထားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်; သို့သော်, RLE မှကိရိယာအသစ်များလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာများသည်လိုအပ်သောအထောက်အပံ့များနှင့်ကျောင်းသားများကိုကမ်းလှမ်းရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားလိမ့်မည်.
အောက်တွင်, မိသားစုများအနေဖြင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောသင်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်မေးခွန်းများအတွက်တုံ့ပြန်မှုများပါ ၀ င်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤခရီးသစ်ကိုစတင်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ကျောင်းသားများနှင့်မိသားစုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်!
ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသားသည်ဝေးလံသောသင်ယူမှုတာ ၀ န်များကိုမည်သို့ရရှိမည်နည်း?
ညနေတိုင်းည ၈ နာရီတွင်နောက်နေ့အတွက်သင်ယူခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလင့်ခ်များသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များကိုအီးမေးလ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်. တနင်္လာနေ့တွင်သင်ကြားရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုရန်ဆရာများကိုဆရာများပေးထားသည်, (သို့) သင်ယူမှုလှုပ်ရှားမှုများအားနေ့စဉ်နှင့်အမျှမျှဝေခြင်း. မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဆရာသည်မည်သည့်နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်, သငျသညျ 8pm မှာနေ့တိုင်းအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်.
အဝေးမှသင်ယူမှုများကို Schoology သင်တန်းစာမျက်နှာများတွင်တင်ပါလိမ့်မည်. လာမည့်သီတင်းပတ်အတွင်းကျောင်းသားများနှင့်မိသားစုများကိုစီစဉ်ရန်အပတ်စဉ်လေ့လာမှုအစီအစဉ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည ၈ နာရီတွင်တင်မည်ဖြစ်သည်. ကျောင်းသားများသည်သူတို့စာရင်းသွင်းထားသည့်သင်တန်းတစ်ခုစီအတွက်သင်ယူမှုအစီအစဉ်များကိုရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်. လေ့လာမှုအစီအစဉ်များသည်သင်တန်းစာရွက်စာတမ်းများစာမျက်နှာတစ်ခုစီ၏ထိပ်တွင်ရှိသောဖိုင်တွဲတစ်ခုတွင်ရှိသည်.
Schoology မိဘ၏ login
မိဘတစ် ဦး အဖြစ် Schoology သို့ logging များအတွက်ညွှန်ကြားချက်
ငါ Schoology သို့ logging အခက်အခဲရှိသည် – [email protected] သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ
ဆရာများတွင်အကြောင်းအရာနယ်ပယ်အားလုံးမှလေ့လာသင်ယူခြင်းများပါဝင်သည်. သင်ယူခြင်းအစီအစဉ်တွင်အကြောင်းအရာအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့်ကျောင်းသားများအားမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးသောအရာများကိုလေ့ကျင့်ရန်နှင့်အားဖြည့်ရန်အတွက်အချိန်ပေးခြင်းတို့ကိုပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်.
ကျောင်းသားများသည်သူတို့၏လေ့လာသင်ယူမှုကာလအားလုံးအတွက်စက်ကိရိယာတစ်ခု၏ရှေ့မှောက်၌ရှိရန်မလိုအပ်ပါ. သင်ယူခြင်းအစီအစဉ်တွင်နည်းပညာမလိုအပ်ဘဲနည်းပညာမလိုအပ်သည့်အတွေ့အကြုံများပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်. ကျောင်းသားများသည်စာဖတ်ခြင်းကိုအချိန်ပေးကြသည်, အရေးအသား, သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်မှသင်္ချာဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းခြင်း.
အထူးteachersရိယာဆရာများ (ထိုကဲ့သို့သောအားကစားရုံအဖြစ်, ဂီတ, နှင့်အနုပညာ) ကျောင်းသားတစ် ဦး ချင်းစီသည်တစ်ပတ်လျှင်သင်ခန်းစာတစ်ခုစီဝေမျှလိမ့်မည်.
MMS သို့မဟုတ် MHS တွင်စာရင်းသွင်းထားသည့်သင်တန်းများအားလုံးအတွက်ကျောင်းသားများသည်ဆရာများထံမှအပတ်စဉ်သင်ယူမှုအစီအစဉ်များကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်. ကျောင်းသားများသည်မိမိတို့၏အချိန်ဇယားနှင့်သင်ယူမှု ဦး စားပေးများနှင့်အကိုက်ညီဆုံးနည်းဖြင့်သင်ယူခြင်းနှင့်ထိတွေ့နိုင်ရန်အပတ်စဉ်သင်ယူမှုအစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မည်. အချို့ကျောင်းသားများသည်သင်တန်းတစ်ခုစီနှင့်နေ့စဉ်ပါ ၀ င်လိုကြပြီးအချို့ကအာရုံစိုက်လိုသည် 1-2 တစ်နေ့လျှင်သင်တန်းများ။
သင်ယူခြင်းအစီအစဉ်များသည်အဓိကအားဖြင့်ကျောင်းသားများအား ၄ င်းတို့ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်ပြီးယခုနှစ်တစ်လျှောက်အသုံးပြုခဲ့သည့်အသုံးအဆောင်များနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်. အကယ်၍ ကျောင်းသားသည်သင်ယူမှုအစီအစဉ်၏မည်သည့်ရှုထောင့်နှင့်မဆိုထပ်ဆောင်းထောက်ခံမှုသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်မှုလိုအပ်လျှင်, ၎င်းတို့သည် Comet Connect Time ၏အားသာချက်ကိုယူရန်နှင့် / သို့မဟုတ်သူတို့၏ဆရာထံအီးမေးလ်ပို့ရန်တိုက်တွန်းပါသည်. Comet ဆက်သွယ်မှုအချိန်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် (ကြည့်ပါ “ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသားသည်တာ ၀ န်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်ကူညီရန်လိုအပ်လျှင် (သို့) တာဝန်များကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရန်ရုန်းကန်နေလျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း?”).
MCS သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုလမ်းညွှန်ကိုဤ အချိန်မှစ၍ အသက်ရှင်ရန်နှင့် Comet Cares ချဉ်းကပ်မှုကိုသင်ကြားခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းကိုထင်ဟပ်စေရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်အတန်းအလေ့အကျင့်အပါအဝငျ. ကျွန်ုပ်တို့၏ Comet Cares ချဉ်းကပ်မှုကကျွန်ုပ်တို့အားသနားကြင်နာတတ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်, တုံ့ပြန်မှု, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများနှင့်မိသားစုများ '' ထူးခြားတဲ့အခြေအနေများနှင့်အခြေအနေများမှသာတူညီမျှ။ ကျောင်းသားများနှင့် ၄ င်းတို့၏မိသားစုများသည်ဤကမ္ဘာချီအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းအတွေ့အကြုံများစွာရရှိသည်. သူတို့ရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း, သူတို့ထိန်းချုပ်မှုထဲကဖြစ်ကြောင်းကို, ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်အတန်းဆိုင်ရာမူဝါဒများသည်မည်သည့်ကလေးကိုမျှမထိခိုက်စေရ. ဤဝေးလံသောသင်ယူမှု၏ဤအချိန်ကာလအတွင်း, ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံသည်ကျောင်းသား၏သင်ယူမှုနှင့်ကျောင်းသားများ၏ကောင်းကျိုးကိုသေချာစေရန်ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အဓိကထားသည်. အောက်ဖော်ပြပါ link သည်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောသင်ကြားမှုကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်အတန်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ချဉ်းကပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်.
မိသားစုများစွာသည်အိမ်တွင်တာ ၀ န်များစွာထမ်းဆောင်နေရကြောင်းနှင့်ပုံမှန်ကျောင်းတက်နေသည့်နေ့တွင်ကျောင်းသားများသည်သင်ယူမှုမဟုတ်သောအချိန်ရှိသည်ကိုနားလည်ခြင်း (ဥပမာ, နေ့လည်စာစား, အတန်းအကြားကူးပြောင်း, သို့မဟုတ်ရပ်နား), ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်မှာကျောင်းသားများသည်သင်ယူမှုလှုပ်ရှားမှုများတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သည့်ကျောင်းတက်ရက်တစ်ရက်ထက်နည်းလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်. ကျောင်းသားများသည်သင်ယူမှုလှုပ်ရှားမှုများတွင်မည်မျှကြာစွာသုံးစွဲသည်မှာသူတို့၏သင်ယူမှုနှုန်းအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်.
ဆရာများသည်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုမှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများပေးလိမ့်မည် (ဥပမာ, မှတဆင့် Google Meet) ဒါပေမဲ့သူတို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ဆရာများအနေဖြင့်လည်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဗီဒီယိုအခြေခံသည့်နည်းပညာများကိုသုံးနိုင်သည်, ကဲ့သို့ FlipGrid နှင့် ကြည့်ရှုပါ, ကျောင်းသားများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်.
MMS နှင့် MHS တွင်, ဆရာများအနေဖြင့်အခွင့်အလမ်းများပေးရန်အချိန်ဇယားအတိုင်းလိုက်နာရမည်, Comet Connect အချိန်ကိုခေါ်, ကျောင်းသားများအနေဖြင့်အစည်းအဝေးချိန်များထပ်နေခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများမှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်.
ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသားသည်တာ ၀ န်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်ကူညီရန်လိုအပ်လျှင် (သို့) တာဝန်များကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရန်ရုန်းကန်နေလျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း?
ဆရာများအားလုံးသည်“ Comet Connect Time” တွင်အကူအညီပေးလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာဆရာများအားအချိန်နှင့်အမျှမေးခွန်းများသို့မဟုတ်အပိုအကူအညီအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ပုံမှန်စီစဉ်ထားသည့်အချိန်ဖြစ်သည်. ဆရာများသည်ကျောင်းသားများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကိရိယာအမျိုးမျိုးမှရွေးချယ်လိမ့်မည်, အပါအဝင် Google Meet, Google Docs, နှင့်အီးမေးလ်. ဆရာတစ်ယောက်ချင်းစီသည် ၄ ​​င်း၏တိကျသောအချိန်နှင့် Comet ဆက်သွယ်ချိန်အတွက်ကိရိယာကိုဆက်သွယ်လိမ့်မည်.
ကျောင်းသားများနှင့်မိဘများဖြစ်ကြသည်, ဒါပေါ့, သူတို့၏ဆရာနှင့်ဆက်သွယ်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်(s) အကူအညီအတွက်အချိန်မရွေး. ဆရာများအနေဖြင့်အတွင်းဖြေပါလိမ့်မယ် 24 အားလုံးမေးခွန်းများကိုနာရီ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Learning Support Team သည်ဤအချိန်ကာလအတွင်းအတတ်နိုင်ဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အထောက်အပံ့များကိုပေးအပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားဆဲဖြစ်သည်, ကျွန်ုပ်တို့၏အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူသူများ၏တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအပါအ ၀ င်, စာဖတ်အထောက်အပံ့ကိုလက်ခံရရှိကျောင်းသားများ, နှင့်ပါရမီရှင်သင်ယူသူ. အောက်ဖော်ပြပါ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်. ထုံးစံအတိုင်း, သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသင့်ကလေး၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအထူးကုသို့မဟုတ်ဆရာအားဖုန်းဆက်ပါသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ပါ. ကျနော်တို့ကကူညီဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်!
အင်္ဂလိပ်စာသင်သားများကိုစာသင်ခန်း / အကြောင်းအရာဆရာများ၊ မိဘများနှင့်နီးကပ်စွာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မည့် ESL ၀ န်ထမ်းများထံမှဆက်လက်အထောက်အပံ့ပေးပါလိမ့်မည်. ESL ဆရာများသည်မိသားစုတစ်ခုချင်းစီကိုဆက်သွယ်ကြသည်, အထောက်အပံ့များကိုကျောင်းသားများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အစီအစဉ်များအပေါ်တွင် မူတည်၍ တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်. ESL သီးခြားသင်ကြားမှုမှန်သမျှကို ESL ဆရာများကပုံမှန်ဆက်သွယ်လိမ့်မည်.
စာဖတ်သူဆရာများသည်အပတ်စဉ်အလုပ်ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်မျှဝေပါလိမ့်မည် (K-4) သို့မဟုတ် Schoology ၌တည်၏ (5-6). ဖြည့်စွက်ကာ, စာဖတ်ခြင်းဆိုင်ရာဆရာများသည်စာဖတ်ခြင်းအလေ့အကျင့်နှင့်အထောက်အပံ့များပေးရန်မိသားစုများနှင့်တစ် ဦး ချင်းဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်.
ပါရမီရှင်အထူးကျွမ်းကျင်သူများသည်ကြွယ်ဝမှုနှင့်တိုးချဲ့ပညာပေးရန်အတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်ကျောင်းသားများနှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုများကိုမျှဝေပါလိမ့်မည်. အဆင့်၌ 1-4, ပါရမီရှင်အထူးကုပါရမီရှင်အလုပ်လက်လှမ်းမီပုံနှင့်ပတ်သက်။ ကန ဦး သတင်းအချက်အလက်ကိုအီးမေးလ်ပို့လိမ့်မည်. အဆင့်၌5နှင့် 6, ပါရမီရှင်အထူးကုများအတွင်းသင်ယူမှုလှုပ်ရှားမှုများတွင်တင်ပါလိမ့်မည် ကျောင်းပညာရေး.
ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသားတွင် IEP ရှိသည်. ငါဘာတွေမျှော်လင့်ထားသင့်သလဲ?
၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ၀ န်ထမ်းများသည် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်အဓိကနှင့်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောညွှန်ကြားချက်နှစ်ခုလုံးကိုအထောက်အကူပြုသောအဝေးသင်အစီအစဉ်များကိုတီထွင်ရန်ဖုန်းနှင့် virtual အစည်းအဝေးများမှတစ်ဆင့်မိသားစုတစ်စုချင်းစီကိုဆက်သွယ်သည်. ကျောင်းသားတစ် ဦး ချင်းစီ၏သင်ယူမှုအစီအစဉ်အပေါ်အခြေခံသည်, ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအထူးကုများနှင့်ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများန်ထမ်းများ post ပါလိမ့်မယ် သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအလုပ်အီးမေးလ်. ဖြည့်စွက်ကာ, အဖွဲ့ ၀ င်များ (ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအထူးကု, ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများန်ထမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ် paraprofessionals) အဝေးမှကျောင်းသားများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်အချိန်ဇယားဆွဲပါမည်.
သင်၏ကျောင်းသားအားပံ့ပိုးမှုသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်, သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်. အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်မတိုင်မှီဝေးလံခေါင်ဖျားသောသင်ယူမှုကိုစတင်ခဲ့သည့်ပြည်နယ်များရှိကျောင်းခရိုင်များမှကျွန်ုပ်တို့သင်ယူခဲ့ရာမှာသင်ယူမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အသစ်တစ်ခုသို့အခြေချရန်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။. သင်နှင့်သင့်ကလေးအတွက်အချိန်ညှိပေးပါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာပေးအဖွဲ့ကဒီကိုအတူတကွတွက်ချက်တဲ့အခါမင်းကိုကူညီဖို့ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိခြင်း.
ထွက်ခွာသည် www.GoNoodle.com မူလတန်းအသက်အရွယ်ကျောင်းသားများအတွက် (အေးဆေးတည်ငြိမ်နှင့်စွမ်းအင်ရန်တိုတောင်းသောဗီဒီယိုများအမျိုးမျိုး)
အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းသားများသည်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုရယူနိုင်သည် ဒီမှာ အသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ထားသောအပန်းဖြေခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်သည်, သတိနှင့်ဘာဝနာလေ့ကျင့်ခန်း, နှင့်တိုးတက်သောကြွက်သားအပန်းဖြေလေ့ကျင့်ခန်း.
မှာ MCS သတိရဂီတကိုရယူပါ: citysilence.org/learn, စကားဝှက်: သတိရ
သင်၏ကျောင်းသား၏တစ်နေ့တာသို့မဟုတ်တစ်ပတ်တာလှုပ်ရှားမှုများကိုကြည့်ပါ။ နေ့စဉ်အချိန်ဇယားနှင့်တစ် ဦး ချင်းပန်းတိုင်များကိုဖန်တီးရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ပါ
ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ကျောင်းသား၏ဆရာများနှင့်စတင်ပါ. သင့်ကျောင်းသား၏ဆရာသည်မဖြေဆိုနိုင်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်သင်ပိုမိုအထောက်အပံ့ရှာလိုသည်, အဆောက်အ ဦး စီမံခန့်ခွဲသူများကိုလည်းသင့်ကိုကူညီနိုင်သည်.
အီးမေးလ် [email protected] နှင့် Mason ဆို၏နည်းပညာအဖွဲ့သည်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်.